ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Hardware Knowledge » ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem]
1 ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 26th August 2009, 11:52 am
ကျွန်တော်ကအခုမှကွန်ပျူတာကိုမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ ပြင်နေတဲ့သူပေါ့..........တစ်နေ့ ကျ အိမ်တစ်အိမ်က ကွန်ပျူတာပြင်ပေးပါလို့ လာခေါ်တယ်ဗျ..........အဲဟိုရောက်တော့
သူက laptop တဲ့ ၀ယ်ထားတာတစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပဲ.........တင်ထားတဲ့ Window က Window Vista လိုင်စင်နဲ့ ပါပဲ.....activate လဲဖြစ်ပါတယ်....processor က
Atom 2.0 Ghz Harddisk က ၂၅၀ Gb Memory က ၂ G တဲ့ ဟုတ်ပြီပေါ့ ....ဘာလုပ်ချင်တာတုန်းဆိုတော့............Vista ကလေးနေလို့ တဲ့ XP ကိုပြောင်းသုံးချင်တယ်တဲ့
လေ...........ရတယ်ပေါ့ harddisk ကပေါသောနေတော့ နှစ်မျိုးလုံးတင်ပေးမယ်ပေါ့...........ဒါနဲ့XP CD အသစ်ကိုထည့်လိုက်တယ်ဗျာ...........Boot တက်မယ့် Device ကို
လည်း CD or DVD လို့ ပေးလိုက်တယ်..........အော်ပြောဖို့ ကျန်တာ သူ့ က DVD Writer drive super multilayer ကိုတတ်ထားတယ်လေ.......ထုံးစံအတိုင်း Blue screen နဲ့Window Configer လုပ်တယ်ပေါ့.........ပြီးတော့........window is starting up ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်.......ဒါပုံမှန်အတိုင်းပဲလေ.........နောက်တစ်ဆင့်မှာ
ပြသာနာတတ်တော့တာပဲ.....ဘာလဲဆိုတော့......Window is starting up ဆိုတဲ့စာတန်းပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ BSoD ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ restart တောင်ပြန်မလုပ်ပေးတော့ဘူး စက်လည်းတတ်မလာတော့ဘူး...........ကျွန်တော်ကအခွေကြောင့်ထင်ပြီးအခွေတွေအများကြီးသုံးကြည့်တယ်......အဆင်မပြေဘူး။ ဒါနဲ့Vista ကိုပြန်တင်ကြည့်တော့ အားလုံး OK တယ်ဗျ............ဒါနဲ့ ကွိုင်တွေပတ်တော့တာပဲ..............
2 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 26th August 2009, 11:57 am
အဲဒီပြသာနာကိုဖြေရှင်းဖို့ နားလည်တဲ့သူတစ်ချိုကိုမေးကြည့်တော့.........BSOD ပေါ်တာက......
hardware ပြသာနာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့.........xp Cd နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးတဲ့.........ပြသာနာပဲ
ကျွန်တော်က laptop ရဲ့RAM ကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တတ်လိုက်တယ်....ဒါလည်းမရဘူး..........
harddisk ကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တတ်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ လည်းပြောကြတယ်.......ဒါပေမယ့် သူက
၀ယ်ထားတာတစ်ပတ်ပဲရှိသေးလို့အာမခံမရတော့မှာစိုးလို့ .........နောက်ဆုံးတော့ဝယ်တဲ့ဆိုင်ကို ပြန်သွားခိုင်းလိုက်တယ်.......လူလည်းဖတ်ဖတ်ကိုမောရောပဲ.........
3 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 26th August 2009, 5:16 pm
Error Code လေး သိရင်ပိုကောင်းပါတယ် .. ဘယ်က ဖြစ်လဲ သိနိုင်ပါတယ်
ဒီအောက်မှာ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Code တွေပါ .. ဟုတ်မလားတော့ မသိပါဘူး ပြောကြည့်တာပါ .. မှားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်နော်
This Stop error, which can be caused by either software or
hardware, indicates thatakernel-mode process or driver attempted to access a
memory location it did not have permission to access oramemory location that
exists atakernel interrupt request level (IRQL) that was too high. A
kernel-mode process can access other only processes that have an IRQL that's
equal to or lower than its own.
This Stop error indicates that indicates that the Windows XP
kernel detected an illegal or unknown processor instruction. The problems that
cause this Stop error can be either software or hardware related and result
from invalid memory and access violations, which are intercepted by Windows'
default error handler if error-handling routines are not present in the code
This Stop error indicates that requested data was not in
memory. The system generates an exception error when usingareference to an
invalid system memory address. Defective memory (including main memory, L2 RAM
cache, video RAM) or incompatible software (including remote control and
antivirus software) might cause this Stop error.
This Stop error indicates that Windows XP has lost access to
the system partition or boot volume during the startup process. Installing
incorrect device drivers when installing or upgrading storage adapter hardware
typically causes this Stop error. This error could also indicateapossible
This Stop error indicatesahardware problem resulting from
mismatched memory, defective memory,amalfunctioning CPU, orafan failure
that's causing overheating.
This Stop error indicates thatadriver is in an
inconsistent or invalid power state. This Stop error typically occurs during events
that involve power state transitions, such as shutting down, or moving in or
out of standby or hibernate mode.
This Stop error indicates that the system attempted to
access pageable memory usingakernel process IRQL that was too high. The most
typical cause isabad device driver (one that uses improper addresses). It can
also be caused by faulty or mismatched RAM oradamaged pagefile.
This Stop error indicates thatadevice driver problem is
causing the system to pause indefinitely. Typically, this problem is caused by
a display driver waiting for the video hardware to enter an idle state. This
might indicateahardware problem with the video adapter orafaulty video
This Stop error indicates thataproblem occurred within Ntfs.sys, the driver file that allows the system to read
and write to drives formatted with the NTFS file system. (A similar Stop
message, 0x00000023, exists for the file allocation table [FAT16 or FAT32)]
This Stop error indicates thatanecessary registry hive
file could not be loaded. The file may be corrupt or missing. The registry file
may have been corrupted due to hard disk corruption or some other hardware
problem. A driver may have corrupted the registry data while loading into
memory or the memory where the registry is loading may haveaparity error.
TroubleshootaStop 0xC0000218 Error Message
This Stop message indicates driver, system file, or disk
corruption problems (such asadamaged paging file). Faulty memory hardware can
also cause this Stop message to appear.
ဒီမှာ မူရင်း ဆိုဒ်ပါ ...
4 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 25th September 2009, 2:07 pm
ကိုဘီလူးပြောသလိုဆိုရင်တော့ Hard disk က ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ Error Code လေးသိရမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ Desktop PC မှာဆိုရင်တော့ BSOD ပေါ်လာခြင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေက RAM, Hard disk, Power Supply အဲဒီသုံးခုကတော့ အဖြစ်အများဆုံးပါ။ Error Code တွေ အားမနာတမ်း၊ မတူအောင်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ Power Supply ကိုသာ စစ်လိုက်ရုံပဲပေါ့ဗျာ။ ခုဟာက Laptop ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ကောင်းကောင်းမနှိုက်ဖူးဘူးခင်ဗျ. အာမခံရှိသေးတော့လည်း ဆိုင်ပြန်ပေးတာ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။
စကားပြောမှားရင် ခွင့်လွှတ်ကြနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 25th September 2009, 2:11 pm
Laptop နဲ့ပါတ်သက်ရင် ၀ရမ်ဒီ ကိုအားကိုးတာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ...ကိုယ်က တတ်ကျွမ်းနေလို့ ကိုင်ရငတော့ ကိစ္စမရှိဘူး..ကိုယ်ကလည်း ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ဆိုရင် စက်အပေါ်ကို မလိုလားအပ်တဲ့ effect တွေဖြစ်သွားရင် မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ...
6 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 8th October 2009, 8:14 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-09-10
Black XP တင်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်
7 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 12th October 2009, 6:10 pm
၀င်းဒိုး XPတင်တာဘယ်လိုမှ့တင်လို့မရလို့တိုင်ပါတ်ဖူးတယ် ကျွန်တော်ကလိလိုက်တာ Vista လိုင်စင်ဗားရှင်းကြီးကုန်သွားတယ်. အစ်ကိုလဲကော်လိုက်တာ..ဟီး နှစ်ပါတ်လောက်စကားမပြောဘူးလေ. သူ့ ၀င်းဒိုးပျက်သွားလို့.
8 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 4:16 am
/-\_tt@Ck3r wrote: ကိုဘီလူးေ၇
ဘာမှပျက်တာမဟုတ်ပါဘူး။မိုက္ကရိုဆောဖ့်က ထုတ်တဲ့ OS တွေကိုတင်မယ်ဆိုရင် သိထားဖို့က ဘယ်တော့မှ အမြင့်ကနေ အနိမ့်ကိုတင်လို့မရဘာဘူး။ အနိမ့်ကနေပဲ အမြင့်ကိုတင်ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ XP ကနေ Vista တင်တာရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Vista ရှိပြိးသားကို XP သွားတင်ရင်တော့ နှစ်ခုစလုံးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင် XP မှာရှိတဲ့ Boot တက်တဲ့ ဖိုင်တွေက version နိမ့်ပါတယ်။ vista မှာကတော့ မြင့်တယ်။ ဒီတော့ vista မှာရှိပြိးသား boot file တွေကို xp တင်လိုက်တဲ့အတွက် xp က version နိမ့်တဲ့ boot file တွေက over write လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အစ်ကိုဆိုလိုတာကို နားမလည်ဘူးဗျ ၊ vista အရင်တင်ထားတဲ့ စက်မှာ xp ကိုနောက်မှတင်ပြီး dual boot လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာလား??? ၊ အရင်ဆုံး XP တင်၊ပြီးမှ vista ကိုတင်မှ dual boot အနေနဲ တင်လို့ရမယ်လို့ပြောတာလား ။
9 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 2:36 pm
/-\_tt@Ck3r wrote: ဟုတ်ပါတယ်။ဒီသဘောပါပဲ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးအစ်ကို ၊ ကျွန်တော့်ဆီမှာ vista ရှိပြီးသားစက်တွေကို xp နောက်မှတင်ပြီးသုံးနေတာပါ ၊ xp အရင်တင်ပြီးသားစက်ကိုလဲ vista နောက်မှတင်ပြီးသုံး
လို့လဲ ရပါတယ် ။ ကျွန်တော် EasyBCD ကိုသုံးပါတယ် ။
10 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 6:37 pm
ဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဆိုရင်.....ကျွန်တော့်အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြောတာတော့ bootCD သုံးရပါမယ်.......
CD ကနေ window တက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့......ပြီးရင်....harddisk ကို......format လုပ်ပြီး.....မှ
window Xp CD ကိုပြန်ထည့်ပြီး window ကိုပြန်တင်လိုက်ရင်ရနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်.......
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ XP နဲ့Vista က NTFS ကိုသုံးတာတူပေမယ့် version မတူဘူးလို့ ပြောတယ်ဗျ.........ဒီလိုလုပ်ရင်ကောရနိုင်လားဆိုတာဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါအုံး......
11 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 6:40 pm
/-\_tt@Ck3r wrote: EasyBCD
ဆိုတာကိုတော့ မသိဘူးဗျ။ ထင်တာကတော့ အဲဒီ့ EasyBCD ကြောင့်လို့ထင်တာပဲ။ မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ dual boot မှာ အမြင့်တင်ပြီးမှ အနိမ့်ပိုင်းကိုတင်လို့မရတာတော့ သေချာတယ်။
ဒါစကားများချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မသိသေးတဲ့ သူတွေလဲ သိကြရအောင် သေသေချာချာ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ ကျွန်တော်ကလဲ စကားများချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ အစ်ကို့အနေနဲ့ dual boot မှာ အမြင့်တင်ပြီးမှ အနိမ့်ပိုင်းကို တင်လို့မရဘူးဆိုတာကို၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရတယ်ဆိုတာကို ပဲပြောချင်တာပါ ။ တစ်ခြား third party software တွေသုံးပြီးလဲ လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်၊ system commander(နာမည်မသေချာပါ) ကိုသုံးပြီး dual boot လုပ်တာကိုလဲ ကျွန်တော်မြင်ဖူးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က EasyBCD ကိုသုံးလို့ EasyBCD ကိုညွှန်းတာပါ ။ vista အရင်တင်ထားတဲ့ စက်တစ်လုံးကို XP တင်ပြီး dual boot လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ EasyBCD ကိုသုံးပြီး vista boot loader ကို Restore လုပ်ပေးရပါတယ် ။ အဲဒါဆိုရင် dual boot ရပါတယ် ။
12 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 6:42 pm
Vista တင်ပြီးမှ XP တင်တာကိုအောက်ကလင့်ခ်မှာဖတ်ကြည့်ပါ။
ခုလို ဆွေးနွေးနေကြတာ သိပ်ကို ကောင်းပါတယ်။ ဒါမျိုး အပြိုင်အဆိုင် ဆွေးနွေးကြမယ့် သူတွေလိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖိုရမ်တစ်ခုလုံးကို သေချာလိုက်ဖတ်ပြီးမှ လိုအပ်တာကို သေချာ ဆွေးနွေးကြတာ ပိုထိရောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
အကြံပေးတာနော်။ နို့မို့ဆို တားတားကို လျှာရှည်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးနေဦးမယ်။
13 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 6:47 pm
နောက်တစ်ခုထပ်ဆွေးနွေးပါအုံး......တစ်နေ့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ.....ကွန်ပျူတာတစ် လုံးသွားပြင်ရတယ်ဗျ......အဲ့ဒီကွန်ပျူတာက......Intel Celeron 3.0 D ပါ...Memory 512 Mb ပါ
ပါတယ်......harddisk က တော့ 80 Gb ပါ......သူ့ ရဲ့board က Asus...865 M ဆိုတဲ့ board ပါ......သူ ဖြစ်တဲ့ ပြသာနာက.....song အသံမထွက်ခြင်းပါပဲ......
အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့Driver လိုတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်.....ဒါပေမယ့်သူ့ ဆီမှာ......Driver ခွေမရှိဘူးတဲ့ဗျ....ဒါနဲ့သူသုံးတဲ့ song device က C-Media...97 ဆိုလို့ ......internet ကနေ download လုပ်ပြီးထည့်ပါတယ်.....ဒါလည်း code 1၀ ဆိုတဲ့ error နဲ့ ........device ကိုအသုံးပြုလို့ မရပါဘူးခင်ဗျာ.....ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း window black xp တင်ရင် Driver တွေတင်ပေးတယ်ဆိုပြီး black ကိုတင်ပါတယ်.....အဲခက်တာက window က song device ကိုသိတာနဲ့window မတက်တော့တာပါပဲ........safe mode နဲ့ တက်ပြီး....song device ကို...ဖြုတ်လိုက်ရင် Window တက်ပါတယ်......ဒီပြသာနာရဲ့ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနီးကတော့
14 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 6:47 pm
ဘီလူး wrote: ဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဆိုရင်.....ကျွန်တော့်အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြောတာတော့ bootCD သုံးရပါမယ်.......
ဘယ်ဟာကိုပဲ အရင်တင်ထား ထားပါ ၊ vista ကိုပဲ အရင်တင်ထားသည်ဖြစ်စေ ၊ XP ကိုပဲ အရင်တင်ထားသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ software ကိုသုံးပြီး dual boot လုပ်လို့ရပါတယ် ။ အဓိက ကတော့ over write ဖြစ်သွားတဲ့ boot loader ကို software သုံးပြီးပြန်ဖော်တာပါပဲ ။ EasyBCD က bootable CD မဟုတ်ပါဘူး ၊ manual installation ပါ ။
15 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 6:49 pm
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို kyawmin ခင်ဗျာ......ကျွန်တော်တို့ လည်းရနိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေကို ...ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.......အစ်ကိုပြောတဲ့ software ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်....ဒါကို...upload တင်နိုင်ရင်တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ.....
16 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 6:50 pm
ဟုတ်ကဲ့ dual boot လုပ်နည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျနော်လည်း အရင်က Manual Installation နည်းတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ Dual Boot လုပ်ဖူးပါတယ်။ ၇လည်းရပါတယ်။
Dual Boot ပြဿနာပြီးသွားပြီဆိုတော့...
ကဲ ကိုဘီလူး ရဲ့ နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ခုကို ဆက်ဆွေးနွေးကြရအောင်
17 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 6:58 pm
အဲ...ဟုတ်သေးဘူးလေ ၊ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာက မရဘူးဆိုတာကို ရပါတယ် ဆိုတဲ့ ရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးဆွေးနွေးနေတာလေ ။ သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင်ဆွေးနွေးနေတာလေ ။
ရတယ် ...ရတယ် [You must be registered and logged in to see this image.] စိတ်ဆိုးဘူး ၊ အကြံပေးတာတွေ မှားနေတာတွေကို ထောက်ပြပေးတာ သွန်သင်ပေးတာတွေ ကို စိတ်ဆိုးဘူး [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ ကျွန်တော့်ကိုလဲ စိတ်မဆိုးကြဖို့ ကြိုတင်
တောင်းပန်ပါရစေ ။ [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်မှားနေတာတွေကိုလဲ သွန်သင်ဆုံးမနိူင်ပါတယ် ၊သွန်သင်ဆုံးမကြပါလို့လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပ်ပါတယ် ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
18 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 7:06 pm
အော် ဟုတ်ကဲ့။ သိပါဘူးဗျာ။ ကျနော်က မလိုလားအပ်ဘဲ စကားများကုန်မှားစိုးလို့ အဖြေရှိပြီးသားဆိုတာကို ပြောတာပါ။ ဟီးဟီး... လျှာရှည်မိသွားဘီ။ တားက Hardware ပိုင်းဘာမှနားလည်ဘူးဗျ။
ဒါဆိုလည်း ဆက်ဆွေးနွေးကြပါ။ (စကားများတော့မယ်ထင်မှ ၀င်တားတော့မယ်။ )
kyawmin wrote: ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပ်ပါတယ် ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
ဒါဆိုရင် ဘာလုပ်တတ်လဲဟင်၊ တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းမလို့။ ကိုယ့်ဆီလာအပ်တုန်း အကျိုးရှိအောင် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ခိုင်းရမှာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။
19 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 7:21 pm
ဘီလူး wrote: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို kyawmin ခင်ဗျာ......ကျွန်တော်တို့ လည်းရနိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေကို ...ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.......အစ်ကိုပြောတဲ့ software ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်....ဒါကို...upload တင်နိုင်ရင်တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ.....
ဒီမှာ ဒေါင်းနိူင်ပါပြီခင်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] ၊ ifile နဲ့အဆင်မပြေရင်ပြောပါ ၊ အဆင်ပြေတဲ့ဆိုက်မှာတင်ပေးပါ့မယ် ။
20 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 8:03 pm
ကျနော် တစ်ခု ထပ်ပြီး ရှာရှည်ချင်လို့ပါ။
ကျနော့် စက်မှာ XP နဲ့ ဦးဘွန်တူး တွဲတင်ထားပါတယ်
နောက်တော့ XP to Vista လုပ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ့မှာ ကျနော့်ရဲ့ ချစ်လေး ဦးဘွန်တူး ပျောက်သွားပါတယ်။ အဲဒါကကော ဘာကြောင့်ပါလဲခင်ဗျာ။
21 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 13th October 2009, 8:10 pm
အယ် နာ့ချစ်ဆုံးလေးနာမည်ကိုက ဦးဘွန်တူး(UBUNTU) လေ။ ဟီး
22 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 31st October 2009, 4:51 pm
ဒါပေမယ့်အိမ်ကစက်မှာအခုထက်ထိ install လုပ်လို့ မရသေးပါဘူး...အဲ...မရဆို...ကျွန်တော့်စက်မှာ
XP (SP2) တင်ထားတာဗျ.....harddisk က 40 GB အဲဒီထဲက 10 GB ကို Ubuntu အတွက်ချန်ထားတယ်...ဒါပေမယ့်ဗျာ... ဦးဘွန်တူးရဲ့Partation မှာကျွန်တော့် HDD ကိုမသိပါဘူးတဲ့
Error က NO DEVICE DETECTED ပါဗျာ.....အကြံလေးဘာလေးပေးကြပါအုံး....
Ubuntu အတွက်ဖြစ်ပေမယ့် HDD error ဖြစ်လို့ ဒီထဲမှာဆက်ဆွေးနွေးလိုက်တာပါ
23 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 1st November 2009, 9:59 am
့ပြင်နေတဲ့သူပေါ့..........တစ်နေ့ ကျ အိမ်တစ်အိမ်က ကွန်ပျူတာပြင်ပေးပါလို
သူက laptop တဲ့
၀ယ်ထားတာတစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပဲ.........တင်ထားတဲ့ Window က Window Vista
လိုင်စင်နဲ့ ပါပဲ.....activate လဲဖြစ်ပါတယ်....processor က
Ghz Harddisk က ၂၅၀ Gb Memory က ၂ G တဲ့ ဟုတ်ပြီပေါ့
....ဘာလုပ်ချင်တာတုန်းဆိုတော့............Vista ကလေးနေလို့ တဲ့ XP
ကပေါသောနေတော့ နှစ်မျိုးလုံးတင်ပေးမယ်ပေါ့...........ဒါနဲ့XP CD
အသစ်ကိုထည့်လိုက်တယ်ဗျာ...........Boot တက်မယ့် Device ကို
လည်း CD or
DVD လို့ ပေးလိုက်တယ်..........အော်ပြောဖို့ ကျန်တာ သူ့ က DVD Writer
drive super multilayer ကိုတတ်ထားတယ်လေ.......ထုံးစံအတိုင်း Blue screen
နဲ့Window Configer လုပ်တယ်ပေါ့.........ပြီးတော့....... :::::;
u can fix that error by using window XP SATA version...if u can't get from local stock , u can download by using google....another version = black edition...possible error = "can't find mass storage device driver.." i 've already faced it...for compaq cq 40 344 tu model laptop...
24 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 1st November 2009, 5:43 pm
ကျွန်တော့် HDD ကတစ်လုံးထည်းပါ.....Partition ဆိုတာကတော့..ကျွန်တော် UBUNTU တင်တဲ့အချိန်ကျရင်.....Partition ပိုင်းတဲ့အဆင့်ကျရင်....No Device Detected ဆိုတဲ့ Error ပေါ်
25 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 9th November 2009, 11:36 am
xigote ပြော တဲ့ laptop က SATA Rate controler ကဒ် Driver လိုလို့ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ။ နောက်ပိုင်းလာတဲ့ laptop တွေက Harddisk controler ကို windows os က မသိတော့ တင်လို့ မရတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့ OS တွေမှာတော့ Driver ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ Black XP တို့ လို OS တွေဆို ကျိန်းသေရမှာပါ။
26 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 14th November 2009, 12:13 pm
အိမ်ကစက်ပေါ့ဗျာ.....seagate ၄၀ GB HDD လေးတတ်ထားပါတယ်.....အဲဒါလေး
ကစစစက်တတ်တတ်ခြင်းမှာတင်ကို Temperature က 40 C ပါတဲ့..အဲတစ်နာရီ
လောက်သုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ၅၀ C ဖြစ်သွားရော... အဲ့အချိန်မှာပဲ CPU က....
temperature 55 C လောက်ပဲရှိသေးတယ်...ဒါတောင် HDD က Casing အပြင်မှာ
တွဲသုံးနေတာ...ဟီး ဟီး ဒီအတိုင်းဆို HDD ပျက်သွားနိုင်တယ်...အခုတောင်တော်
တော်လေးကိုကြောင်နေပြီ...လုပ်ကြပါအုံးဗျ.....နောက်တစ်ခုက Primary မဟုတ်တဲ့
Logical Partition မှာ Windows တင်လို့ ရလားသိချင်ပါတယ်....
27 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 14th November 2009, 3:02 pm
CPU temp: မြင့်တယ်ဆိုတာက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိူင်ပါတယ် ။ Fan တွေကောင်းကောင်း အလုပ် လုပ်သေး
လားဆိုတာကို သေချာစစ်ပါ ၊ fan တွေကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်ရင်လဲဖြစ်တတ်ပါတယ် ၊ နောက်
တစ်ခုက CPU glue တွေမကောင်းတော့ရင်လဲဖြစ်တတ်ပါတယ် ၊ အခု အစ်ကိုဖြစ်နေတာက CPU glue
မကောင်းတော့လို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ၊ CPU glue ကိုသေချာပြန်ထည့်ကြည့်ပါအုံး ။ နောက်တစ်ခုက Windows ကို logical ပေါ်မှာတင်လို့ ရနိူင်မလားဆိုတာ ၊ အဲလိုမေးရင်တော့ ရတယ်
လို့ဖြေရပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိစေချင်လို့ အောက်ကလင်ခ့်မှာ သွားဖတ်
ကြည့်ပါ ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ တင်ကြည့်ဖူးပါတယ် ၊ logical မှာပုံမှန်လုပ်ပုံလုပ်နည်းအတိုင်းတင်ရင်
boot တောင်မတက်ပါဘူး ။
28 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 14th November 2009, 6:24 pm
မရဘူးလို့ ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးနော် ၊ တင်လို့ရတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်နိူင်လဲဆိုတာကိုသိဖို့နဲ့၊ဘာကြောင့် primary မှာပဲတင်သင့်လဲဆိုတာကို စာကိုဖတ်ပြီးစဉ်းစားလို့ရနိူင်အောင်တင်ပေးတဲ့သဘောပါ ။ ကျွန်တော့်တုန်းက မရဘူးဆိုတာ logical နဲ့ခွဲထားတဲ့ partation ကို windows တင်တော့ ဘယ်လိုမှကို boot မတက်တာ၊ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက windows တင်ပြီးမှ မတက်တာမဟုတ်ဘူးနော် ၊ windows တင်ဖို့ Windows installation bootable CD ကိုက boot မတက်တာပဲ(ကျွန်တော်ညံ့တာလဲ ပါတာပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.] ) ၊ အဲဒါနဲ့ primary ပြန်ပြောင်းပြီးပဲတင်လိုက်တယ် ၊အဲဒီတော့မှရသွားတယ် ၊ အဲဒီတုန်းကတော့ဘာကြောင့်ဆိုတာကို ကျွန်တော်သေချာမလေ့လာမိခဲ့ဘူး ။ အစ်ကိုပြောတဲ့ KMD ကိုတော့ မရောက်ဖူးလို့ကျွန်တော်မသိပါဘူး [You must be registered and logged in to see this image.] ။ နောက်တစ်ခုက linux ပြောင်းတင်လိုက်လို့ ntldr missing ဖြစ်တယ်လို့တော့ တစ်သတ်မှတ်တည်းပြောလို့မရပါဘူး ၊ ntldr missing ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိူင်ပါတယ် ။ linux တင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲ ကျွန်တော်မကြုံးဖူးပါဘူး ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က linux မှန်သမျှကို VMware မှာပဲစမ်းခဲ့လို့ပါ [You must be registered and logged in to see this image.] ။
29 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 17th November 2009, 7:43 pm
ကျွန်တော်လည်း Logical မှာတင်တာဒီလိုမျိုးကြုံရတယ်ဗျ....အဲ...Windows တော့ တင်လို့ ရတယ်... Partition ပိုင်း
ပြီး restart ကျသွားပြီးရင်... ပြန်မတတ်တာမျိုး .....ပြီးတော့...Windows အားလုံးတင်ပြီးမှ ntldr missing ဆို
ပြီး.... error တက်လာတာမျိုး....နောက်တစ်မျိုးကတော့..... လုံးဝကို..... Windows မတတ်တာမျိုးကိုကြုံခဲ့ရတယ်
တစ်နေ့ ထည်းနော် အဲ...တစ်ခါထည်း..
ဆက်ပြောရအုံးမယ်... ကျွန်တော့် ရဲ့seagate HDD ကို partition ၃ ပိုင်းပိုင်းထားတာဗျ....
နှစ်ခုက....၁၆ တစ်ခုက ၈ ပေါ့.....အဲ့ဒီမှာ... C: နဲ့D ကို... 16ထားပါတယ် E: ကို... ၈ ပဲထားတယ်
အဲ...ခုနကလို Logical မှာတင်တာတွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ... ကျွန်တော်က C နဲ့E ကို Format ချပစ်လိုက်တယ်....အဲဒီမှာ...စတွေ့ တော့တာပဲ.... ကျွန်တော့်ရဲ့Backup partition ဖြစ်တဲ့ D: ကို... Windows မှာမတွေ့ ရတော့ ဘူး... HDD scan software နဲ့scan စစ်ချရင်
D: ကို unknown အဖြစ်နဲ့ တွေ့ ရတယ်... အဲ့ဒါကို Mount လုပ်ပြီးသုံးရင်ရတယ်ဗျ...အဲ့Window
ထဲမှာတော့ အဲ့ဒီ partition အဖြစ်နဲ့ မတွေ့ ရဘူး.. အလန်းကြီးပဲကျွန်တော့်စက်က ကျွန်တော်က...FORMAT လည်းမချချင်တဲ့အတွက်....ဒီအတို်င်းဆက်သုံးနေတယ်...ကဲဒါကဘယ်လိုကြောင့်လည်းဆိုတာကို...
30 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 28th November 2009, 12:28 pm
မတွေ့ ပါဘူးခင်ဗျာ.....software သုံးပြီး.. Partition Find and Mount software သုံးပြီး...ရှာ
ရင်တွေ့ ပါတယ်.....ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင် Format ချရပါမယ်တဲ့...ဟီးဟီး...စားစရာလေး...ဦးနှောက်...
31 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 1st February 2010, 3:11 pm
မိုက်ခရိုဆော့ မှာ အမြင့်ကနေ အနိမ့်ဆင်းမရတာဟုတ်တယ်ဗျ။ တခြားဆော့ဝဲ သုံးရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။
ဒီတိုင်းမရတာကတော့သေချာတယ်။ နောက်တစ်ခုက based on နဲ့ လဲ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ဆီ
စက်နှစ်လုံး window လာချိန်းခိုင်းတယ်။ နှစ်ခုလုံးက7တင်ထားတာ။ laptopတွေ ။ တစ်လုံး က7based on။
တစ်ခုက xp basedon။ xp based on ကို xp ပြန်တင်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။7အခြေခံထားတာကို ကြတော့
မရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း virusထဲ့ ပြီးပြတင်းပေါက်ကိုချ လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ xpတင်လိုက်တယ်။ အဆင်
ပြေပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် driverတင်တော့ ပြသနာတက်ရော။ သူကvista အတွက်ပဲဆိုပြီးပြောလာတယ်။ ဒါနဲ့ 7ပဲ ပြန်
တင်ပေးလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်ကြုံ ဖူးတာလေပြန်ပြောပြတာပါ။ ကျွန်တော်လည်းဘာမှတတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
32 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 10th April 2010, 6:54 pm
ကျွန်တော် အခုကြုံရတာက ကိုဘီလူးမေးထားတာနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်.......အခုနောက်ပိုင်ထွက်တဲ့စက်
ပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် vista based on ဆိုရင် bootable cd e.g "Hiren" လိ်ုဟာမျိုးသုံးပြီး ဝင်းဒိုးရှိ
တဲ့ အခန်းကို format ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် xp ကိုရိုးရိုးနဲ့အရင်တင်ကြည့်ပါ.....မရင်ရင်(ဘာerrorပဲတက်
တက်) Windows XP SP3 Gladiator Vista 2.0 Ultimate 2010 with SATA လိုမျိုး နောက်ဆုံးမှာ with SATA ပါတဲ့ xp ကိုတင်မှရမှာပါ....ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့SATA တွေဟာ
xp ကိုမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်....ဒါကြောင့် ဝင်းဒိုးခွေမှာSATA driversတွေထည့်ပေးရပါတယ် ကိုယ့်စက်drivers နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် xpခွေကိုလဲလုပ်လို့ရပါတယ် Nlite လိုဟာမျိုးကိုသုံးပြီးလုပ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ထားပြီးသားဝယ်သုံးတာအကောင်းဆုံးပါ....
အင်တာနက် ကောင်းရင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရင်လဲ ရပါတယ်.........
33 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 22nd April 2010, 11:48 am
လုပ်ကြပါအုံးဖျို့ .....ကျွန်တော်ပဲပိန်းလို့ လားမသိဘူး.....သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ စက်ပါ....
Memory DDR2 1Gx2 800GHZ
Asus P5 KPL/AM Motherboard
Nividia 8500 GT 512 MB
ဒါပေမယ့်အခုကျွန်တော့်ဆီလာပြတော့ ကွန်ပျုတာက window မတတ်ပါတဲ့
နောက်တစ်ခုက Graphic တွေကြောင်နေပါတယ်...တဲ့ဗျာ...သုံးနေတဲ့ window က Window Vista ပါ...ဒါနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ Window မတတ်တာလည်းလို့ မေးတော့ HDD ကအသစ်ပါတဲ့ Graphic card ကတော့ နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်တဲ့ ပြသာနာက Windows တင်ပြီးတဲ့နောက်... Graphic card Driver တင်ပြီးရင် Window မတတ်တော့ပါဘူးတဲ့....
ွှကျွန်တော့်ရဲ့ သုံးသပ်မှု့ ကတော့ Graphic card ကြောင်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်....ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်မည့်နည်းလမ်းလေးရှိရင်မစပါအုံး.....ဒါနဲ့safe Mode ကနေ့window တက်လို့ ရပါတယ်....နောက်ပြီး safe mode ကနေ Graphic Driver တွေကိုဖျက်ချလိုက်ရင်Window ပြန်တတ်ပါတယ်တဲ့ဝိုင်းစားပေးပါအုံးဗျ.....
34 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 17th May 2010, 9:06 pm
နည်းနည်းဖောကြည့်မယ်နော် [You must be registered and logged in to see this image.]
ကျွန်တော့်စက်မှာလည်း အဲသည်လိုသံးဖူးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်စက်က XP SP3 နဲ့ Ubuntu တင်ထားတာဗျ။ အဲဒါ XP Dark Edition ကိုပြောင်းသုံးချင်တာနဲ့ windows ပြန်တင်တာ . .
XP cd နဲ့ boot တက်ရင် Ubuntu က ဘယ် partition မှာရှိတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးဗျ (ကျွန်တော့် HDD က ၄ပိုင်း ပိုင်းထားတယ်)အစ်ကို့စက်က ဘယ်အပိုင်းမှာ Ubuntu တင်ထားတာလဲဆိုတာမမြင်ရဘဲ
်format ချမိလားလို့ပါ။ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်နော် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
35 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem] on 6th June 2010, 10:36 pm
အကိုတို.ပြောတာ ပညာရပါတယ်ကျွန်တော်လည်း မသိသေး ပါဘူး ဘာမှမမပြောတော. ပါဘူး
အကိုငြင်းကြရင်းနဲ. အမုန်ပေါ်ပါ.စေလို. ကျွန်တော် ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေဆုံနည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါ.စေ
36 Re: ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသော Hardware ပြသာနာများ [Problem]